May 2011 ~ दीप्सको डायरी
दिप्स शाह on 12:53 PM
मिसिसिपीको किनारैभरी बिस्कुन पसारिएको हिउँ तन्नामा डुल्दैथिएँ। मेरो आँखा हिउँले कक्रिएर सबै पात झरेको एउटा अग्लो रुखमा पर्योि जहाँँ टुप्पोनिरको चोके जस्तोमा एक जोडी ठुला चरा काठका टुक्राटुक्री मिलाउदैथिए। नियालेर हेरेँ एक्जोडी चिल (इगल) रहेछन्। ह्या हाम्रातिर कुखुराको चल्ला चोर्ने चिल त रहेछ नि! खासै चराजातिमा मलाई चिल प्रती उस्तो रुची कहिल्यै थिएन र त्यसबेला पनि रहेन तर खोइ के ले तान्यो मलाई फेरी उतै मुन्टो फर्काएर हेर्न थालेँ। ति चिलका जोडी गुँड बनाउदैरहेछन्। पालैपालो सुइँय उडेर परपर पुग्दै काठका टुक्राटुक्री नङ्रामा च्यापेर ल्याउँदै तिनले निकै तन्मयाताकासाथ एक झिक्रे गुँड बनाए। गुँडको लग्भग निर्माणकार्यको अन्तमा भाले चिल निकैपर पुगेर त्यो हिउँफाँटको कुनै कुनाबाट एक झ्याम्टो घस्याङ्गघुसुङ्ग (सुकेका झारपात) ल्यायो र पोथिले चुच्चो र नङ्राको सहायताले गोलोगहिरो आरामदायी गुँड मिलाएर ठीक्क पारी। हेर्दाहेर्दै पोथीले टुक्लुक्क दुई वटा प्यारा अण्डा पारी। म कतिबेला ति चिलकाजोडीलाई मन पराउन थालेछु । एकै निमेषपनी आँखा नझिम्क्याइ हेरिरहन थालेँ। मिसिसिपिको त्यो किनार जहाँ सबै ऋतुमा हिउँले साम्राज्य फिँजाउछ झन त्यसबखत त मौसम कहालीलाग्दो थियो। हिउँसग्गै तुषारे बतास यसरी बहन्थ्यो कि लाग्थ्यो कतिबेला त्यो रुखै लछारेर लैजाला , ति चिल जोडीको गुँड झन रुखको टुप्पोमा थियो ,त्यो माइनस २० डिग्रीको चिसोले नकठ्याङ्रिएको मेरो मुटु हिउँ तुषारे बतासले राक्षसी बेग हान्दा ति चिलजोडीका गुँड हावामा हल्लिएको देखेर घरीघरी बरफ-पत्थर हुनखोज्थ्यो। ओहो थाहै नपाई कतिबेला मलाई ति चिलजोडीको चासो र ख्याल हुनथालेछ । हिउँका डल्लै सहित बेगवान हावाको सिरेटोले क्रुरता प्रदर्शन गर्दा म कक्रिँदै मुटु थिचेर प्रार्थना गर्थेँ कि त्यो गुँडलाई केही नहोस् भगवान!!
अण्डा पारेपछी चिलजोडी कहिल्यै सङ्गै एक बाँकटे सम्म हान्न निस्केनन्। भोक प्यास नलागुन्जेल दुबैसङ्गै चुच्चो जोडेर टाँसिएर अण्डा छोपिराख्थे । माइनस २० डिग्रीको चिसोबाट ति प्यारा अण्डाजोगाएर तातो जो राख्नु थियो। बोक प्यास लाग्दा पालैपालो एक जना उडेर कतै टाढा पुग्थ्यो र पेटमा चारो हालेर फर्कन्थ्यो तब सम्म अर्कोले पखेटा फिँजाएर अण्डा न्यानो राख्दै पहरा दिइरहन्थ्यो। कुनैकुनै बेला त बाहिर जानेले आफु अघाएर अलिकती चारो अर्कोलाई पनि मुखमा च्यापेर ल्याउनेरहेछ र बचेँरालाई झैँ खुवाउँदो रहेछ। सृस्टि्को नियम-खटनको यो स्रिन्खला हेर्दै म उसबेला आँफैलाई नियालिरहेको थिएँ। यि अमुक प्राणी जीब त यसरी सन्तानका लागि दत्तचित्त रहन्छन र जिम्मेवारी उठाउंछन भने हामी सृस्टिुकै सर्बश्रेष्ठ प्राणी मान्छेले आफ्नो उत्तरदायित्व ननिभाउनु कती न्यायोचित ! जिम्मेवारी पुरागरेको खण्डमा दम्भ गर्नु पनि कती लज्जास्पद!
एबँ रितले कती हप्ता महिना बिते त्यो चिसो मिसिसिपीको किनारमा । मैले आँखा हटाएको छैन र चिलजोडीको ख्याल गर्नपनी छोडेको छैन। अझै भनुँ ति अण्डाबाट निस्किने एक जोडी प्यारा बचेँरा चिलको आगमनको ब्यग्र प्रतिक्षा ति जोडी चिललाई जतिनै मलाई पनि थियो। अझै बेसी थियो कि!! हिउँतुषारे बतासको उग्रताले निरन्तर आफ्नो दैनिकी मच्चाइरहेकै थियो। एक चिसो मध्यान्हमा हिउँको बर्षा छिचोल्दै पोथी चिल चारो खोज्न निस्की। भाले चिल प्यारा अण्डा न्यानो पार्दै पखेटा फिँजाएर पोथी चिलको प्रतिक्षामा थियो। पर्खाइको घडी निकै लम्बियो पोथी फर्किन । भाले चिल अधिर हुँदै अण्डा छोपिरह्यो पोथिको बाटो हेरिरह्यो घण्टा बिते, दिन ढल्यो , रात छिप्पियोपोथी फर्किन । क्रुर बतासको झोँका सङ्गै बत्तिएर एउटा सुकेको रुखमा ठोक्किएर बजारिँदा चारो खोजेर फर्किनेक्रममा पोथिले प्राण त्यागिसकेकी थिई। यि सब दु:खान्त घटनासँग अनजान भाले भोको पेटमा अण्डा छोप्दै पोथिको बाटो हेरिरह्यो हेरिरह्यो ,,,तर कतिन्जेल!! अण्डा छोपौं भोकले आक्रान्त पारिसक्यो। भोक मेट्न निस्कुँ अण्डा चिसिएर खेरा जान्छन र बचेँरा आउनेछैनन। धैर्यको बाँध अचानक भत्कियो , उदास उजाड मन बोकेर अन्तत: भालेले गुँड छोड्यो ,अण्डा छोड्यो र बियोगमा बेस्मारी पखेटा फड्फडायो । शायद अन्तिम पटक अर्को हाँगोबाट फर्केर उजाड गुँडमा बेवारीस लडिरहेका अभागी अन्डा हेर्यो र भुर्रण उड्यो अनजान गन्तब्यतिर एक रित्तो भग्न जिन्दगी लिएर। त्यसबेला मलाई आफ्नै मुटु चर्किएर धाँजाधाँजा फाटेको महसुस भयो। अनायासै आँखा रसाएर आशुका ढिक्का गाला हुँदै चिउंडोबाट ओइरिसकेछन्। हिउँतुषारोमा एक्लो भालेचिल ओझेल परेपछी फर्केर गुँडतिर एक नजर हेरेँ ,,अण्डा त्यसरिनै लडिरहेको थियो तर हिउंको फुस्फुसले छोपिनै लागेछ ,,बतास चलिरहेको थियो ,,हाँगो हल्लिरहेको थियो ,,गुँड अझै लड्खडाउँदै थियो अग्लो रुखको चोकेमा।
(आँखाबाट निन्द्राले बसाइँ सर्दा रातको सन्नाटा सङ्गै मेरो नेशनल जोगराफी च्यानलमा "मिसिसिपी टूर" को एक अनुभब अनुभूती। )
निलो शिरिष !!
दिप्स शाह on 5:07 AM
जैतुनको हाँगो टेकेर
बिरहबोल्ने ढुकुरजोडी कुर्लन थाले
भूमध्यसागरको बैँशालु हावा
तन मन छोएर बहन थाले
फेरी बाटैभरी निला शिरिष झुल्न थाले,
टक्क उभिन्छु र अनुहार थापेर नियालिरहन्छु,
झर्दैगरेको एक्झुप्पाले मिठो थप्पड गालामा हान्दा
आँखाबाट बिछोडका पीडा यसरी ओइरिदिन्छन् ..
बितेका हरएक कहालीलाग्दो एकाँकीपल
सोहोरेर आँखामा ल्याइदिन्छ यो निलो शिरिषले
म उँभो हेरिरहन्छु एक डालो निलो झुप्पा,
ओहो! कती पटक यि पोथ्रा यसरीनै निलाम्य भए
शिरिष फुले झरे फुले झरे ,,,
हरेक पटकको यो निलो शिरिषले
मलाई 'तिमी' सम्झाउँछ
तिमीसङ्गको बिछोड सम्झाउँछ
हामी बिचको दुरी सम्झाउँछ
यो चौथो वसन्त पर भागेछ
मेरो हृदयको शिरिष 'तिमी'
यो आँखाको सामुन्ने नफुलेको नझुलेको !!
यो ताजा निलो शिरिष च्वाक्क म्वाइ खाएर
उँभै हिमालतिर फर्केर एक झोंका श्वास फ्याँकेकोछु
कतै तिमी सम्म पुगोस यो शुवास
यो शिरिष देखी त्यो शिरिषसम्म ,,,
मनदेखीयो त्यो मनसम्म
यो मनदेखी त्यो मनसम्म ।।।
बसन्त बनी आयौ तिमी ... गीत
दिप्स शाह on 2:53 AM
बसन्त बनी आयौ तिमी जिन्दगीमा
बहार बनी छायौ तिमी जिन्दगीमा
डुबेकोथेँ आँशुभित्र हाँस्न सिकायौ
हारेकोथेँ जीवनदेखी बाँच्न सिकायौ
खुशीयाली भै आयौ तिमी जिन्दगीमा
अन्धकारको गोरेटोमा दीप जलायौ
जीवन दिने अमृत बनी तिमी सल्बलायौ
मुस्कान बनी आयौ तिमी जिन्दगीमा
बसन्त बनी आयौ तिमी ...